September 2019 – Gulled Salah
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa maanta kulan la qaadtay qaybaha kala duwan ee bulshada.
Waxaan maanta shir kula qaadanay xarunta PDRC qaybaha kala duwan ee bulshada Rayidka ah.‪ Kulankan oo qayb ka ah shirar wadatashi xiriir ah oo guddigu waday ayaa diirada ku saaraynay qaabka lagu gaari karo hannaanka axsaabta badan, fahamka bulshada ee barnaamijkan iyo talooyinka ku aadan sidii looga gudbi lahaa caqabadihii hore. Shirkan intii uu socday …
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa maanta kulan la qaadtay qaybaha kala duwan ee bulshada. Read More »
Gudoomiyaha iyo xubanaha Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa bilaabay kulamo wadatashi oo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada PL.
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta bilaabay kulamo wadatashi ah oo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland. Shir ka dhacay xarunta TPEC ee magaalada Garowe, waxaa kasoo qaybgalay xubnaha Guddiga Doorashooyinka, saraakiil matalayay Xarumaha Cilmi Baarista iyo Jaamacadaha fadhigoodu yahay Puntland. Guddiga ayaa xubnaha siiyay warbixin ku …
Gudoomiyaha iyo xubanaha Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa bilaabay kulamo wadatashi oo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada PL. Read More »
Safiirka Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliyaa Nicolas BERLANGA iyo wafdi uu hogaaminayo, ayaa maanta soo booqday xafiiska Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, wuxuuna kulan la qaatay Xubnaha Guddiga. Wafdiga waxaan xarunta dhexe ee TPEC kusoo dhaweeyay Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Guuleed Saalax Barre oo ay weheliyaan xubnaha guddiga, waxayna kawada hadleen arrimaha hirgalinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland. …
Gudoomiyaha Guddiga KMG doorashooyinka PL, ayaa xarunta Guddiga kusoo dhaweeyay safiirka midowga yurub u fadhiya Somalia. Read More »